၁၇.၆.၂၀၁၈. ပထမပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
ကော့စတာရီကာ ဝ-၁ ဆာဘီးယား
အိုက်စလန်အသင်းနှင့် သရေပွဲကြုံတွေ့ပြီးနောက် “ဒါဟာအစပဲရှိပါသေးတယ်” ဟု အာဂျင်တီးနားပြော
ဗျူနိုအဲရစ် ၊ ဇွန်၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဇွန်လ ၁၆ ရက် ညက ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့သည့် ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ အိုက်စလန် နှင့် အာဂျင်တီးနား အသင်းတို့ပွဲစဉ်၌ ၁ ဂိုးဆီ သရေရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် “ ဒါဟာ အစပဲ ရှိပါသေးတယ်” ဟု ဘောလုံးကြယ်ပွင့် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအသင်းက ပြောကြားလိုက်သည်။
၁၆.၆.၂၀၁၈. စတုတ္ထပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ်
ခရိုအေးရှား ၂-ဝ နိုင်ဂျီးရီးယား
၁၆.၆.၂၀၁၈. တတိယပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ်
ပီရူး ဝ-၁ ဒိန်းမတ်
၁၆.၆.၂၀၁၈. ပထမပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
ပြင်သစ် ၂-၁ သြစတြေးလျ
၁၅.၆.၂၀၁၈. တတိယပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ် အုပ်စု ဘီ စပိန် ၃-၃ ပေါ်တူဂီ (၂၄',၅၅',၅၈') (၄', ၄၄',၈၈')
၁၅.၆.၂၀၁၈. ဒုတိယပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ် အုပ်စု B အီရန် ၁-၀ မော်ရိုကို (၉၅')
အီဂျစ် ဝ-၁ ဥရုဂွေး
ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးမှ အတူတကွ ပေါင်းစည်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း သမ္မတပူတင် ပြောကြား
မော်စကို၊ ဇွန် ၁၄ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် က မော်စကိုမြို့တွင် ဇွန် ၁၄ရက်တွင် စတင်ကျင်းပသော ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွင်း ရုရှားနိုင်ငံ၌နေထိုင်သူ ဘောလုံးပရိသတ်များ၊ ကစားသမားများ နှင့် တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် အဆင်ပြေချော့မွေ့မှု ရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။